Mustaqbalku Waa Hada: A Barbaarinta Immun for Peace Peace - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Waxaa qoray Tony Jenkins, PhD *
Hordhaca Tifatirayaasha. In this Isku Xirka Corona, Tony Jenkins wuxuu kormeerayaa in COVID-19 ay muujineyso baahi deg deg ah oo loo qabo barayaasha nabada si ay u keenaan xoojin weyn oo xagga barbaarinta ah si loo odoroso, loo naqshadeeyo, loo qorsheeyo loona dhiso mustaqbal la doorbido.
Faallooyinka laga bixiyay 4th Wadahadalka Caalamiga ah ee E-Dialog - "Waxbarashada Nabadda: Dhisida Mustaqbal Caadil ah oo Nabadeed," oo ay marti galisay Gandhi Smriti & Darshan Samiti (Xarunta Caalamiga ah ee Gandhian Studies iyo Peace Research, New Delhi) Ogosto 13, 2020.
Markii Prof. Vidya Jain ay gaareen si ay u sahamiyaan mowduucyo ku saabsan wadahadalkan elektaroonigga ah waxaa naloo jiheeyay fikradda ah in xiriir laga dhex sameeyo waxbarashada nabadda iyo aafada. Waxaa iska cad inay muhiim noo tahay inaan tixgalino doorka iyo awooda isbadal ee barashada nabada ee wax ka qabashada cadaalad darada badan ee isku xiran, iyo caqabadaha bulshada, siyaasada iyo dhaqaalaha ee nabada oo ay muujiyeen kana sii dartay COVID-19. Isla mar ahaantaana, waa lama huraan inaan ka fiirino dusha sare. Fayraska 'coronavirus', xaaladaha badankood, wuxuu si fudud u muujinayaa wixii horey u jiray. Baarayaasha nabada waxay iftiiminayeen tobanaan sano rabshadaha qaabdhismeedka neoliberalism taasoo ka dhigeysa kuwa ugu nugul markay soo jeedaan. Saamaynta aan dheelitirka lahayn ee uu fayrasku ku yeeshay dadka nugul ayaa ahayd mid si murugo leh loo saadaalin karo. Haatan, dabcan, waxbarashadda nabada waa inay sii wadaa qaadashada khamiiskan baaritaanka muhiimka ah. Waa inaan baarnaa nidaamyada awooda iyo aragtiyada adduunka ee nagu horseeday halka aan maanta joogno. Si tartiib tartiib ah, waxaan ognahay in fududeynta waxbarashada nabadeed ee muhiimka ah ay muhiim u tahay iftiiminta qaababka iyo nidaamyada rabshadaha iyo cadaalad darada. Intaas waxaa sii dheer, barashada nabada ee muhiimka ahi waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geedi socodka barashada guud ee lagama maarmaanka u ah kobcinta miyir-qabka - noqoshada "soo jeedo" - iyo ka hortagga fikradaheena adduunka ee ku saabsan sida wax yihiin iyo sida ay tahay inay ahaadaan.
In qorshaha weyn ee waxyaabaha, marka ay timaado hirgelinta waxbarashada muhiimka ah ee nabadda waxaan si fiican u sameyneynaa. Waxaan si farxad leh ula yaabay inaan arko eray bixinno sida rabshad dhismeed iyo cunsuriyad qaab-dhismeed ah oo ay qaateen ilaha warbaahinta guud ee falanqaynta ay ku sameeyeen COVID-19 iyo kacdoonnadii u dambeeyay ee ku saabsan rabshadaha booliiska ee lagula kaco dadka madow ee Mareykanka. Waxaan u maleynayaa waxtarka waxbarashadda muhiimka ah ee nabadda waxaa lagu xoojiyay xaqiiqda ah in iskuulaadka rasmiga ahi uu si macquul ah ugu fiicnaado horumarinta qaar ka mid ah awoodaha garashada ee ay ku saleysan tahay - gaar ahaan kor u qaadista fikirka gorfeynta, iyo in yar oo ka yar, fekerka muhiimka ah. Si kale haddii loo dhigo, waxbarashada nabadeed ee muhiimka ah waxaa lagu xoojiyay xaqiiqda ah inay ka soo qaadato qaar ka mid ah qaababka tarbiyadeed ee togan ee xoogga saaray iskuulka dhaqanka. Waxbarashada nabadda ee halista ah daruuri uma baahna in ardayda la baro noocyo cusub oo fikirka iyo waxbarashada ah.
Dabcan, waxaa jira taxaddarro waaweyn oo ku saabsan falanqeyntan rooga ah. Fikirka khatarta ah, tobanaankan sano ee hore ee 21st qarnigii, mudadii asxaabteyda Kevin Kester (2020) ku sifeeyay inuu yahay run run kadib, ayaa si qoto dheer loo wada doortay. "Runta" ayaa noqotay mid dhoobo ah. Halkii ay ka samayn lahaayeen baaritaan qoto dheer oo ay baari lahaayeen ilo iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan arrin, qaar badan ayaa si fudud u raadiya qaybo fikrad ah - ama waxaa lagu quudiyaa maqaallo ay ku dheehan tahay algorithms-ka warbaahinta bulshada - taas oo xaqiijineysa eexda hore ee aragtida adduunka. Waxa intaa sii dheer oo ku sii kordhaya xaaladdan adag shakhsiyaad siyaasadeed oo si aan gabasho lahayn been ugu sheegaya istiraatiijiyad ula kac ah oo lagu dejinayo ajendayaasha siyaasadeed. Waxay ogyihiin in beenta oo runta laga hormariyo ay ka dhigan tahay inay ajandaha xukumaan; sameynta runta ayaa ka dhib badnaan doonta daadinta beenta. Iyada oo laga warqabayo xilligii runta ka dib ee aan ku nool nahay, waxaan u baahannahay inaan sii horumarinno awoodaha ardayda ee fikirka halista ah - si looga hortago fikradaha adduunka laga qabo - in laga gudbo bayaannada "Waxaan aaminsanahay" - in fikradaheenna lagu taageero cilmi baaris - iyo in laga qaybqaato asxaabtayada wada hadalka furan. In kasta oo aan u rajeynayno ardaydeena inay ku kalsoonaadaan waxa ay rumeysan yihiin, haddana waa inaan sidoo kale gacan ka geysanno ku dhiirrigelinta iyaga ahmiyadda ay leedahay in marwalba la furnaado isbeddel iyadoo laga fikirayo loona babac dhigayo aragtidooda adduunka iyo waxa ay aaminsan yihiin.
Caqabad kale oo weyn oo hortaagan in wax laga qabto ayaa ah in waxbarashadda nabadda ee muhiimka ahi ay baareyso qaab-dhismeedka bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo aasaaska aasaasey iskuulku uu doonayo inuu joogteeyo oo uu tarmo - aasaaska ay xukumaan siyaasadaha ay aasaaseen ugu horreyn kuwa dhaqaalaha iyo bulshada. Qaar badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda waxay aad u daneynayeen inay wax ugu soo celiyaan "si caadi ah" sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. Runtii, dad badan - gaar ahaan kuwooda u nugul inay bilaabaan - waxay ku dhibaataysan yihiin culeysyada saaran waajibaadka caafimaadka dadweynaha ee muhiimka ah. Dhibaatooyinka dhaqaale, bulsho, iyo maskaxeed ee cudurkan faafa waa kuwo aad u tiro badan. Laakiin “ku soo noqoshada caadi” wax isbeddel ah kuma keeni doontaa kuwii markii horeba ku dhibaataysnaa xaaladihii “caadiga ahaa” ee hore?
Su'aal soo baxda - iyo mid aan u maleynayo inaynaan weli si ku habboon uga hadal dhaqan ahaan - waa maxay waxay noqonaysaa "Cusub oo caadi ah," ama sidee baynu u jeclaan lahayn inaynu ku noqonno adduunku markuu u fududaa?
Tani waa mawduuc caan ah "Xiriirada Corona, ”Taxane maqaalo ah oo aan tafatir ku ahaa Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada oo weydisa su'aasha ah sida aan u aasaasi karno"caadi caadi ah. ” Dib ugu noqoshada May, waxaan dhajinay Manifesto loogu talagalay Caadiyan Cusub, olole ay dhiirrigeliyeen Golaha Latin America ee Nabadda Cilmi-baarista (CLAIP), oo naga caawiyey inaan diiradda saarno muraayadaan muhiimka u ah waxbarashada nabadda. CLAIP waxay xustay in "fayrasku uusan dili karin (sida ugu badan) sida caadiga ah ee qalloocan ee aan ugu dadaalno soo noqoshada." Ama si badheedh ah, "fayrasku waa calaamad muujinaysa jirrada caadiga ah ee aan ku soo wada nool nahay."
The Manifesto loogu talagalay Caadiyan Cusub waxay bixisaa wax ka badan oo kaliya naqdin: waxay sidoo kale soo bandhigeysaa aragti anshax iyo cadaalad ah oo ku saabsan caadi cusub oo aan ku dadaalno. Tan ugu muhiimsan, waxay iftiiminaysaa qaar ka mid ah fikirka laga yaabo inay lagama maarmaan u tahay barashada waddadayada xorriyadda iyo ka baxsashada fikirka gumeysiga iyo aragtida adduunka ee raalli ahaanshaha rabshadaha qaabdhismeed ee lagu qaabeeyey caadadii hore.
Waxaan arkaa Manifesto loogu talagalay Caadiyan Cusub iyada oo ah qaab-dhismeed barasho oo ku habboon kobcinta aragtida guud ee nabadda iyo waxbarashada dhalashada adduunka. Qaar ka mid ah weydiimaha ay soo bandhigto waxay naga caawinayaan inaan tixgelinno qaab-dhismeed anshax leh oo ku aaddan heerka nolosha ee ay tahay inaan higsanno, cidda ku raaxeysaneysa, iyo sida aan ku gaari karno.
Mid ka mid ah Bayaanka ka dhigayaa si cad u cad yahay in waxbarashada nabadda u baahan tahay in la keeno xoogga weyn ee mustaqbalka - si gaar ah, si ay u odoroso, naqshadaynta, qorshaynta iyo dhismaha mustaqbalka la doorbido. Inta badan barashadeenu waxay xooga saaraan wixii tagay. Waa dib-u-eegis, halkii ay horay u sii eegi lahayd. Waxaan si xeel-dheer u baareynaa waxa la cabirayo iyo kan la taaban karo, waxa aan arki karno, waxa jira iyo wixii jiray - laakiin fiiro yar ayaan siineynaa waxa noqon kara iyo inay noqdaan.
Waxbarashada nabada waxay ubaahantahay inay xooga saarto mustaqbalka - si gaar ah, si loo odoroso, loo naqshadeeyo, loo qorsheeyo loona dhiso mustaqbal la doorbido.
Adduunyada oo xaqiiqda siyaasadeed ay si adag gacanta ugu hayso xukunnada bulshada, fikirka utopian-ka waxaa loo diiday inuu yahay khiyaali. Si kastaba ha noqotee, himilooyinka utopian-ka waxay had iyo jeer door muhiim ah ka ciyaaraan kobcinta isbeddelka bulshada iyo siyaasadda. Elise Boulding, oo ah cilmi baare nabadeed caan ah iyo aqoonyahan ayaa ka hadashay sida muuqaalka utopianku uu ugu adeego laba hawlood: 1) in la qanciyo oo la dhaleeceeyo bulshada sida ay tahay; iyo 2) in lagu sharaxo hab aad loo jecel yahay oo loo abaabulo arrimaha aadanaha (Boulding, 2000).
Betty Reardon (2009) waxay soo bandhigeysaa qiimaha sawir qaadista utopian qaab la mid ah:
“Utopia waa fikrad uur leh, oo lagu sameeyay maskaxda suurta galnimada aan ku dadaali karno, dadaalkana aan ku baranno sida loo fahmo fikradda, si dhab looga dhigo. Uur la'aan, nolosha cusub, bulshada aadamiga sida aadanaha, run ma noqon karto. Utopia waa fikrad, fikirka bilowga ah ee nolosha cusub ee nidaamka bulshada cusub ugaga soo dhexbixi karo himilo siyaasadeed oo macquul ah, oo ku dhalatay geedi socodka siyaasada iyo barashada oo u bisil kara nidaam bulsho oo isbeddelay; laga yaabee waxa aan u nimid inaan ugu yeerno dhaqan nabadeed, waaqic adduun cusub. Maqnaanshaha fikradda asal ahaanta, waxaa jira fursad yar oo adduun wanaagsan oo looga gudbi karo suurtagalnimada oo dhab ah.
Aan ku celiyo laynka ugu dambeeya sida aan u maleynayo inay qabato qeyb weyn oo ka mid ah caqabadaha na soo food leh:
"Maqnaanshaha fikradda asal ahaanta, waxaa jira fursad yar oo adduun wanaagsan oo looga gudbi karo suurtagalnimada oo dhab ah. ”
Markaa waqtiga yar ee ii haray, runtii waxaan rabaa inaan ku quusto fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan sida waxbarashada nabadeed ay si tartiib tartiib ah noogu dhaqaajineyso jihadaan mustaqbalka.
Aynu ku bilowno kala furfurista cillad maskaxeed. Muuqaaladda aan sida caadiga ah ku qabanno mustaqbalka waxay salka ku hayaan waaya-aragnimadeenna adduunka ee xilligan iyo tafsiirkeennii hore. Si kale haddii loo dhigo, aragtidayada waxa mustaqbalku hayaa inta badan waa saadaal toosan, oo ah is-fulin is-sheegis ah. Rajo-xumo kasta oo aan qabanno xilligan la joogo, oo ku qotonta waaya-aragnimo taariikhi ah oo dhab ah, waxay noo horseedaysaa in la soo saaro mustaqbal “suuragal ah”, kuwaas oo ah sii socoshada aasaasiga ah ee jidadkii hore.
Fikirkan waxaa lagu qabtay laguna adkeeyay mala-awaalkayaga iyada oo loo badinayo sheekooyinka dystopian-ka iyo warbaahinta loogu talagalay dhalinyarada waaweyn. Hada qalad ha igu fahmin, waxaan jeclahay sheeko ama filim wanaagsan oo dystopian ah, waxay bixisaa digniin ku saabsan waxa iman doona haddii aynaan badalin dariiqa. Si kastaba ha noqotee, warbaahinta dystopian-ka wax nagama caawiso inaan ka fikirkeenna mustaqbal ka beddelno "suurtagalnimada" (waxa laga yaabo inay ku saleysan tahay waddadeena hadda) - "doorbididda," mustaqbalka kaliya ee aan sida dhabta ah u dooneyno. Markii aan u horseedo aqoon isweydaarsiyo mustaqbalka ardayda - ama dadka waaweyn - dabinkan fikirka ahi wuxuu isu muujiyaa inuu yahay caqabad weyn. Markii la waydiiyey inay ka fekeraan laylis ardayda laga codsaday inay ka fikiraan oo ay sharraxaan mustaqbal mustaqbalka la doorbido, jawaabta guud waxay tahay "runtii way adag tahay!" ama "Waan joojin kari waayey ka fikirka waxa aan u maleynayo inay dhici doonaan" ama waxay si fudud "u dareemeysaa wax aan macquul aheyn" in lagu muujiyo muuqaal utopian mustaqbal ah.
Waa muhiim inaan fahanno in bini aadamku xaqiiqada ka dhisayo maskaxdiisa ka hor inta uusan ku dhaqmin dibadda, sidaas darteed sida aan uga fikirno mustaqbalka sidoo kale waxay u qaabeysaa ficilada aan ku qaadno xilligan. Marka, haddii aan qabno aragtiyo taban oo mustaqbalka ah, aad ayaan ugu badanahay inaan beddelno dariiqadeenna hadda. Dhinaca kale, haddii aan qabanno sawirro wanaagsan oo mustaqbalka doorbidaya, waxay u badan tahay inaan qaadno tallaabooyin wanaagsan xilligan.
Tani waa wax taariikhyahan reer Holland ah mustaqbalna leh Fred Polak uu baaray (sida loo tarjumay oo loo tixraacay Boulding, 2000). Wuxuu daahfuray, in taariikhda oo dhan, bulshooyinka qabtay sawirrada wanaagsan ee mustaqbalka la awoodsiiyay inay qaadaan tallaabo bulsheed, bulshooyinkaas oo aan lahayn sawirro togan ayaa ku dhacay burburka bulshada.
Qayb ka mid ah caqabadaha ayaa ah in waxbarashadeennu aysan si ku filan u awood siin ardayda wax ku barata hababka iyo qaababka looga fikiro mustaqbalka. Si looga fikiro loona dhiso mustaqbal la door bidaa waxay u baahan tahay male, hal abuur, iyo ciyaar. Marka dabcan waa inay layaab yar ku noqotaa in qaar badan oo ka mid ah mufakiriinteena ugu caansan ee utopian-ka lagu tababaray farshaxanka hal abuurka ah. Manhaj kasta ama maado dugsiyeed oo qaadan kara fikradaha noocan oo kale ah - farshaxanka, muusikada, cilmiga aadanaha - wuxuu ku jiray jaranjarooyinka dib-u-habeynta waxbarashada neoliberal muddo tobanaan sano ah. Manhajyada noocan oo kale ah looma arko inay muhiim u yihiin kaqeybgalka ardayda ee nidaamka dhaqaale ee hadda jira. Malaha inbadan oo inaga mid ah halkaan ayaa nolosheena nolosheeda qaar nalagu yiri: “Shahaadadaas shaqo kuma heli kartid.”
Si aan ugufuro nafteena si aan uga fikirno mustaqbalka la doorbidayo waxay u baahan tahay, ugu yaraan si kumeelgaar ah, in aan ka fogaanno fekerka maangalka ah isla markaana aan qaadanno qaababkeenna caqliga leh ee saameynta leh ee fikirka, ogaanshaha iyo ahaanshaha. Waxaa jira qaabab badan oo aan tan ku sameyn karno.
Elise Boulding (1988) waxay ku nuuxnuuxsatay ciyaar maskaxeed iyo muuqaal ahaan qalab lagu sii daayo mala-awaalka. Marka la eego ciyaarta maskaxda, waxay xustay Huizinga oo xustay "ciyaarta waxay noo sheegaysaa inaan nahay dad caqli badan, maxaa yeelay waan ciyaareynaa sidoo kale waan ognahay inaan ciyaarno - oo waxaan dooranay inaan ciyaarno, anagoo og inay caqli xumo tahay" (p. 103 ). Dadka waaweyni way ciyaaraan, laakiin siyaabo aad u dhaqan badan. Waxaan luminay xorriyadii ciyaarta ee ku dhex lahaan jirtay dhalinyarada. Marka soo kabashada ciyaarta ee dadka waaweyn waxay muhiim u tahay soo kabashadayada male-awaalka bulshada.
Sawir qaadiddu waa aalad kale oo lagu sii daayo mala-awaalka. Si aan u sheego saaxiibkey Mary Lee Morrison (2012):
Dhamaanteen waan wada muuqaal. Dhexdeenna hoose waxaan ku qaadnaa dareen, jajab, sawirro, aragtiyo, codad, ur, dareenno iyo aaminaad. Mararka qaarkood kuwani waxay matalayaan dhacdooyin dhab ah ama mala awaal ah oo laga soo maray wixii soo maray. Mararka qaarkood waxay matali karaan rajadayada iyo hamigeenna mustaqbalka. Mararka qaar sawirradan waxay noogu yimaadaan riyooyin intaan seexanno. Mararka qaarkood riyo maalmeed. Mararka qaar sawirradan ayaa cabsi leh. Mararka qaar maya. ”
Waxaa jira habab badan oo kala duwan oo sawir-qaadis ah, oo ay ku jiraan khiyaano sabayn bilaash ah (qaab cayaareed), riyo maalmeedka baxsadka, dib u shaqaynta miyir-qabka ee riyada hurdada, iyo mustaqbalka waxbarashadda waxaan u adeegsannaa in badan oo diiradda la saarayo mustaqbalka shaqsiyeed iyo bulsho (Boulding, 1988). Qaab-dhismeedkan dambe wuxuu ku soo jiitaa dadka kale oo dhan si diirad leh oo ula kac ah. Tani waa aasaaska tusaalooyinka aqoon isweydaarsiga mustaqbalka la doorbiday ee ay soo saareen Warren Zeigler, Fred Polak iyo Elise Boulding oo aakhirkii isu beddelay aqoon-isweydaarsi ay Elise si joogto ah u qabatay 1980-yadii oo ku saabsan "Sawirka Dunida Hubka Nukliyeerka".
Qaar badan oo ka mid ah barayaasha nabada, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya tacliinta sare, ayaa laga yaabaa inay dareemaan raaxo la'aan inay u adeegsadaan qaar ka mid ah hal-abuurka, hababka ciyaarta ee waxbarashadooda. Waa la fahmi karaa in arintu sidan tahay. Inteena ugu badan ayaa nalagu baray si aan u aaminno taasi maahan sida waxbarashadu uga dhacdo waxbarashada sare. Waxaan sidoo kale wax ku barnaa machadyada tacliinta ee ansaxiya baaxad kooban oo habab lagu ogaanayo iyo ahaansho. Kuwa asaaggeen ah ayaa laga yaabaa inay naga fiiriyaan, ama, sida had iyo jeer aniga igu dhacday, waxaan la kulannaa indho wareer asxaabteyda ah markay ka gudbayaan fasalkayaga oo ay arkeen ardayda oo ku mashquulsan masraxyo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada la dulmay, qoslaya, jirkoodana u sawiraya sarbeebyada dulmiga, ama ciyaaro. In kasta oo aqbalaadda asaaggeenna tacliinta ay muhiim u tahay amniga shaqadeena gudaha akadeemiyadda, waa in aynaan u oggolaan in ay hor istaagto sameynta barasho macno iyo macno leh oo ardayda ku qalabeysa aqoonta, xirfadaha iyo hal-abuurka si loo qorsheeyo mustaqbal nabdoon.
In kasta oo ciyaarta iyo sawiradu ay muhiim u yihiin soo saarista male-awaalka, haddana waxaan sidoo kale u baahannahay inaan qaabno qaababkan ogaanshaha iyo ka-mid ahaanshaha qaab-waxbarasheed oo dhammaystiran oo ku saabsan isbeddelka bulshada. Dhowr sano ka hor, Betty Reardon (2013) waxay soo bandhigtay seddex nooc oo baaritaan baaritaan ah oo ku habboon barashada ka qaybgalka siyaasadda. Kuwani 3 qaab - muhiim / falanqeyn, anshax / anshax, iyo feker ahaan / ruminative - waxay u wada shaqeyn karaan sidii iskudhaf loogu talagalay barashada barashada kaas oo lagu dabaqi karo barashada rasmiga iyo kuwa aan tooska ahayn ee nabada iyo isbedelka bulshada.
Milicsiga / falanqaynta falanqaynta waa qaab guud ahaan la mid ah waxbarashada muhiimka ah ee nabadda ee aan horay u soo sheegay. Waxay taageertaa horumarinta miyir-qabka muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah carqaladeynta fikradaha adduunka ee muhiimka u ah isbeddelka shakhsi ahaaneed iyo waxtarka siyaasadeed. Anshax iyo anshax milicsi waxay ku martiqaadeysaa tixgelinta jawaabaha kala duwan ee jahwareerka bulshada ee soo kordhay inta lagu jiro fekerka muhiimka ah / falanqaynta. Waxay ku martiqaadeysaa bartaha inuu tixgeliyo jawaab anshax / anshax ku habboon. Feker / ruminative milicsiga ayaa bixiya hanuuninta mustaqbalka, oo ku martiqaadaya bartaha inuu ka fekero mustaqbal la doorbido oo salka ku haya adduunkooda anshaxa / anshaxa.
Waxaan la jaanqaaday qaababkan baaritaanka milicsiga ah oo ah qaab dhismeed waxbarasheed labadaba waxbarashadayda rasmiga ah iyo tan aan rasmiga ahayn (Jenkins, 2019). Isku xigxiggaygu waa la mid yahay, laakiin cabbiro qaar lagu daray. Waxaan ku bilaabayaa feker muhiim ah / gorfeyn si aan u caawiyo bartayaasha wax u weydiinta adduunka sida ay tahay. Ka dib waxaan u dhaqaaqaa milicsiga anshaxa, waxaan ku martiqaadayaa ardayda inay qiimeeyaan haddii adduunku sida uu u jiro ay la jaan qaadayaan qiyamka ay hayaan iyo jihooyinkooda anshax iyo anshax. Tani waa fursad weyn oo lagu keeno qaab-dhismeedka anshaxa ee jira. Waxaan aad u dhiirigelinayaa isticmaalka Manifesto loogu talagalay Caadiyan Cusub sababtoo ah waxay ku xiran tahay waqtigaan. Kuwa xiiseynaya, Ololaha Caalamiga mar hore ayuu soo saaray oo daabacay su'aalo la adeegsanayo (eeg: "Dib-u-eegida Kalkaalkeenna Tilmaamidda Socodka Waddada illaa Caadiga Cusub"). Waxa kale oo laga yaabaa inaad tixgeliso adeegsiga qaababka kale ee caadiga ah sida Axdiga Dunida, Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha, iyo Baaqa Qaramada Midoobay iyo Barnaamijka Waxqabadka ee Dhaqanka Nabadda oo dejinaya qaybo ka mid ah “qiyamka, dabeecadaha, caadooyinka iyo qaababka dabeecadaha iyo dariiqooyinka nolosha ”oo si ficil ahaan ugu adeegi kara aasaaska amarka adduunka oo nabad ah. Aniga oo u maleynaya ardayda inay u arkaan adduunka maanta in lagu qalday qaababkan iyo qiimayaashooda, halkaas waxaan ka keenayaa fursado fikirka fekerka iyo milicsiga leh, oo aan sida caadiga ah ku fududeeyo howlaha hal abuurka ee kobcinaya aragtida waxa la doorbido, iyo waxa noqon kara. Ugu dambeyntiina, si aan u taageerno awoodsiinta ardayda inay tallaabo ka qaadaan aragtiyadan, waxaan sidoo kale ku dhiirrigelinayaa inay qaabeeyaan soo-jeedinno mustaqbalka ah, ka qaybgalaan qiimeynta asxaabta, ayna dejiyaan qorshayaal ay ku soo bandhigayaan istiraatiijiyad waxbarasho iyo mid siyaasadeed oo ku wajahan aragtida runta ah.
Rajadayda iyo ujeedkeyga inaan la wadaago qaar ka mid ah fikradaha wax ku oolka ah, fikradaha barbaarinta ee khibradeyda shaqsiyadeed, ayaa ah inaan kiciyo xoogaa milicsiga rajada iyo balanqaadka ah barashada nabada oo ah aalad lagu dhiso mustaqbal cadaalad iyo nabad ah. Walaacdaydu waxay tahay in waxbarashada nabadda, iyada oo aan loo jeedin jihada mustaqbalka, ay weli ka yar tahay waxqabadka ku jira fikirka muhiimka ah, fikirka caqliga leh. Anaga oo ah barayaasha nabada, waxaa naloo soo bandhigay dhowr caqabadood oo xagga waxbarashada ah oo dhab ah oo ku saabsan waxbarista aasaasida dhaqamada nabada. Lahaanshaha fahamka muhiimka ah ee adduunkeenu micnaheedu waa wax yar haddii aynaan sidoo kale helin wadooyin si barbaarin ah loogu kobciyo xukunnada gudaha ee aasaaska u ah qaababka ficillada siyaasadeed ee dibadda ee aan rabshadaha lahayn ee lagama maarmaanka u ah in la dhiso oo la dhiso mustaqbal aad loo doorbido.
Maaddaama sanad-dugsiyeedka cusubi bilaabmayo, ugu yaraan kuweenna ku nool cirifka woqooyi, waxaan ku dhiirrigelinayaa barayaasha inay ka fiirsadaan isku-darka qaar ka mid ah weydiimahan muhiimka ah ee ka fikiraya, ka fikiraya, qorsheynaya iyo aasaasidda "caadiga cusub" ee boostada COVID -19 dunida manhajkooda.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo oraahda saaxiibkey iyo lataliyahayga Betty Reardon (1988), oo na xusuusinaysa "hadii aan wax u barano nabada, macalimiinta iyo ardayda labaduba waxay u baahan yihiin inay lahaadaan fikrad wax ku ool ah oo ku saabsan dunida isbadashay ee aan wax u baranayno . ” Waxbarashada nabada, waa lama huraan in mustaqbalku hada yahay.
Tony Jenkins PhD wuxuu leeyahay 19 + sano oo khibrad ah hagida iyo naqshadaynta nabadaynta iyo barnaamijyada waxbarasho ee caalamiga ah iyo mashaariicda iyo hogaaminta horumarka caalamiga ah ee barashada nabada iyo waxbarashada nabada. Tony hadda wuxuu bare ka yahay Barnaamijka Caddaaladda iyo Nabadda ee Jaamacadda Georgetown. Laga soo bilaabo 2001 waxa uu soo noqday Agaasimihii Guud ee Machadka Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (IIPE) iyo ilaa 2007 isaga oo ah Isuduwaha Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (GCPE). Tony ee cilmi-baarista codsatay ayaa diiradda lagu saaray baaritaanka saamaynta iyo wax ku oolnimada hababka waxbarashada nabadda iyo barbaarinta ee kobcinta shakhsi ahaaneed, isbedel bulsho iyo siyaasadeed. Waxa kale oo uu xiiseynayaa qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedka waxbarasho ee aan tooska ahayn iyo horumarka leh xiisaha gaarka ah ee tababarka macallimiinta, habab kale oo loo maro amniga adduunka, qaabeynta nidaamyada, hub ka dhigista, iyo jinsiga.
Tixraacyo & Kheyraad
Boulding, E. (1988). Dhisida dhaqanka madaniga ah ee caalamiga ah: Waxbarid loogu talagay adduun isku tiirsan. Saxaafadda Kulliyadda Macallimiinta.
Boulding, E. (2000). Dhaqamada nabada: Waa dhanka qarsoon ee taariikhda. Jaamacadda Syracuse Press.
Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. (2020). Manifesto qaab caadi ah oo cusub. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/manifesto-for-a-new-normality/
Isku xirnaanta Corona: Barashada adduun cusub. (2020). Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/tag/corona-connections/
Guddiga Axdiga Adduunka. (2000). Axdiga Dunida. https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/echarter_english.pdf?x23441
Jenkins, T. (2019). Reardon's edu-learner praxis: Waxbarista waxtarka siyaasadeed iyo isbadalka bulshada. Gudaha Snauwaert, D. (Ed.), Sahaminta Betty A. Reardon aragtideeda ku aaddan waxbarashada nabadda: Dib u jaleec, horay u soco. Guga Laga keenay: https://www.academia.edu/39988174/Reardons_Edu_learner_Praxis_Educating_for_Political_Efficacy_and_Social_Transformation
Kester, K. (2020). Run, posttruth iyo COVID-19: Jawaabaha waxbarashada qaarkood. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/truth-posttruth-and-covid-19-some-educational-responses/
Morrison. ML (2013). Maxaa mustaqbalka haya: Isbeddellada ku saabsan waxbarashada nabadda. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/what-the-future-holds-trends-in-peace-education/
Morrison, ML (2012). Hindisaha mustaqbalka: Sawirka duni fosil-xor ah. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/futures-invention-imaging-a-fossil-free-world/
Dib udhac, B. (1988). Waxbarista masuuliyadaha caalamiga ah: Manhajyada loo qorsheeyay macallinka ee waxbarashada nabadda, K-12. Saxaafadda Kulliyadda Macallimiinta.
Dib udhac, B. (2009). Ku soo dhowow utopia: Milicsiga xaqiiqooyinka iyo fursadaha. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/welcome-to-utopia-reflections-on-realities-and-possibilities/
Diidmada, B. (2013). Qiyaas milicsiga iyo fikirka ah ee waxbarashada nabadeed oo dhameystiran / muhiim ah. Gudaha Trifonas, PP & Wright, B. (Eds.), Waxbarashada Khatarta Ah: Wadahadallo Adag. Guga Laga keenay: https://www.peace-ed-campaign.org/wp-content/uploads/2020/05/Meditating-the-Barricades.pdf
Dib udhac, B. (2020). Dib-u-eegista waxbarashadeenna barbaarinta ee ku socota dariiqa caadiga ah ee cusub. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda. https://www.peace-ed-campaign.org/reviewing-our-pedagogy/
Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. (1948). Ku dhawaaqida xuquuqda aadanaha (217 [III] A). Laga keenay: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. (1999). Baaq iyo barnaamij ficil dhaqan nabadeed: qaraarada / ay ansaxiyaan Golaha Guud (A / RES / 53/243). Laga keenay: https://digitallibrary.un.org/record/285677/files/A_RES_53_243-EN.pdf
# mustaqbalka waxbarasho
Hiroshima oo dijitaal ah ayaa lagu soo bandhigayaa "Mudaaharaad Caan ah oo ka dhacay Postwar Japan: The Antiwar Art of Shikoku Gorō"
Racfaan caalami ah ilaa sagaal dowladood oo Nukliyeer ah (saxiix codsiga!)
Qeexitaan Kuxiran: Laga soo bilaabo Cadaadiska Wadajirka ah ee Culeyska Wadareed illaa Soo Kabashada Wadajirka ah
Waxaa laga yaabaa 19, 2020 opinion 0
Kuwa leh khibradaha hore ee cabsida wadajirka ah, gaar ahaan kuwa ka badbaaday xasuuqii ka dhacay Rwanda, waxaa kicin kara dhibaatada corona ee hadda jirta. Jean Pierre Ndagijimana wuxuu soo bandhigayaa jawaabo naxdin leh oo lala socodsiinayo waayo aragnimada hore ee cabsida wadajirka ah xilligan la joogo. [sii wad akhriska…]
Isu-dheellitirka Nolosha Shaqada inta lagu jiro Kala-karanaynta Bulshada ee Kobacsan
April 4, 2020 Warar & Muuqaal 0
Maria Margarita A. Acosta, Ph.D. waxay la wadaagaysaa fikradeeda ku saabsan isku dheelitirka doorarka kala duwan, maadaama ay la qabsaneyso caadada cusub ee ka shaqeynta guriga inta lagu jiro COVID-19 Waxay u adeegsataa hal-abuurnimo xaqiijinta baahiyaheeda iyo tan kooxdeeda gurigeeda, iyada oo dejinaysa hawl-maalmeed maalinle ah oo ay ku jirto waqti muujinta ruuxiga ah. [sii wad akhriska…]
April 12, 2020 Features, Warar & Muuqaal 0